Uyenza njani imowudi yokugcina ibhetri kwi-Apple Watch | Ndisuka mac
UIgnacio Sala | | Apple Watch, Tutorials
Xa iApple yazisa iApple Watch ngo-Okthobha u-2014, abasebenzisi abaninzi bazibuza ukuba ingaba ibhetri inokumelana ngokugqibeleleyo nosuku oluxakekileyo emsebenzini. Ukufika kwayo kwintengiso, siyayibona indlela inkqubo yokusebenza ye-watchOS ekulawula ngayo ukusetyenziswa kwebhetri kakuhle, kodwa ngamanye amaxesha, ngakumbi kwiintsuku ezinde kakhulu, siphelelwa libhetri. U-LIimodeli ezintsha ze-Apple Watch, uthotho 1 kunye nothotho 2 zisinika ukuzimela okukhulu ukuba kunye neprosesa yayo entsha isivumela ukuba sinyamezele usuku olunzima lomsebenzi ngaphandle kwengxaki, nokuba zi-2, ngakumbi kuthotho lwe-2.
Xa sele siqhelile ukunxiba iwotshi kwakhona, kuyamangalisa kuthi ukuba singayinxibi esihlahleni sethu ukubona ixesha, into esele siyiqhelile xa ixhomekeke kwiselfowuni ukulungiselela loo njongo. Ukuba njengoko iiyure zihamba sibona ukuba ibhetri yesixhobo sethu iyehla ngokukhawuleza kakhulu okanye nangona sisazi ukuba usuku lomsebenzi wethu luza kuba lude kunesiqhelo kodwa sifuna ukuqhubeka nokuba nexesha esihlahleni, eyona nto sinokuyenza kukukhubaza unxibelelwano newotshi kwaye ibonisa kuphela ixesha ngaphandle kwezaziso zalo naluphi na uhlobo.
Imowudi yokulondoloza ibhetri ivumela susa lonke unxibelelwano kwiwotshi kwaye ubonise ixesha kuphela. Ngokuzenzekelayo le ndlela inokusebenza xa ibhetri yeApple Watch yehla yaya kwi-10%, kodwa sinokuyisebenzisa ngesandla. Ukwenza imowudi yokugcina ibhetri kufuneka silandele la manyathelo alandelayo.
Sebenzisa imo yokuGcina iBhetri yeApple
Kuqala siya kwiZiko loLawulo leApple Watch, utyibilika ukusuka ezantsi ukuya phezulu kwiscreen.
Sinqakraza kwipesenti ebonisa inqanaba lebhetri yangoku.
Emva koko siyityibilikisa umnwe kwi icon ebonisa ukugcinwa kwebhetri ukuze isebenze.
Isikrini siza kuboniswa sisazisa ukuba unxibelelwano ne-iPhone luya kulahleka kwaye kuphela lixesha eliza kuboniswa. Kufuneka nje ucofe ku Landela ukuze uyenze isebenze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyenza njani imo yoGcino lwebhetri kwi-Apple Watch
IMarginNote Pro yeMac, ixabiso lesiqingatha sexesha elimiselweyo